अच्युत कंडेल : भाग्य
त्यसपछि नाचिन्थ्यो मज्जाले। दौडेर आमालाई देखाइन्थ्यो अनि भनिन्थ्यो - "यी मेरो भाग्यमा आकाङ्क्षा लेखेको छ।"
भाग्य, साँच्चै यसले पिठ्युँमा बोकेको अस्तित्व बिसाउँछ चैं कहाँ? परार साल अमरका बा'लाई सर्पले टोक्यो। अमर त आमाको पेटमै थियो। समयमै एन्टी भेनम नपाउँदा ज्यान गयो। कस्तो भाग्य लेखेर ल्याएको रै'छ, छोरोको अनुहार देख्नै नपाइ गयो। गाउँभरिको चियागफ।
इन्जिनियरिङ्ग प्रवेश परीक्षा दिएर भर्खरै बाहिर निस्केको सौभाग्यको;
नाम निस्कियो - मिहिनेतको फल मीठो भन्दै खुशीसाथ स्टाटस राख्यो।
नाम निस्किएन - साला भाग्यमै छैन। सराप्यो भाग्यलाई।
कतै यात्रामा निस्कँदा जाम पर्यो। गाडी बिग्रेर एक घण्टा कुर्नुपर्यो। कस्तो अशुभ बार, अशुभ दिनमा साइत गरिएछ। "एक घण्टा अगाडि हाम्रो गाडीलाई उछिनेको गाडी सहित चारवटा अरु गाडीहरू पहिरोले थिचिएछन्", गाडी हिँडाउनै लाग्दा चालकले सुनाउँछन्। धन्न गाडी बिग्रेर बचिएछ। भाग्य बलियो रै'छ। जय जयकार भयो भाग्यको।
कस्तो आश्चर्य! घरी टुलुटुलु हेरेर बस्छ, घरी बेस्सरी समाउँछ रे; भाग्यले। घरी धानको भकारीमा सुन, सुनको भकारीमा हीरा थपिदिन्छ। घरी हीराको भकारीमा कीरा लगाइदिन्छ। बचेरालाई माउबाट छुट्टाउने पनि उही भइदिन्छ। माउलाई बचेराबाट खोसिदिने पनि उही भइदिन्छ। हर्षका छिटाहरू बादल च्यातेर वर्षाइदिने पनि उसैले रे। मनका भित्ताहरूमा गोलीका छर्रा रोपेर कृष्णले मख्खनको घैंटो फोरेझैं आँखाका घडाहरू फोरिदिने पनि उसैले रे। कसैलाई फलिफाप अनि कसैलाई अभिशाप हुने गरी लेखिदिन्छ चैं किन? न हामी उसको बाउपट्टिको न आमापट्टिको। "साँच्चै भाग्य हुन्छ त?" मथिङ्गलमा झनै ठूलो प्रश्न तेर्सिन्छ। सबै सजीव या निर्जीव आ-आफ्नै समयचक्रमा घुमिरहँदा मिलन हुने विन्दुलाई संयोग भन्न छाडेर भाग्यको नामाकरण भएको पो हो कि? या सान्त्वनालाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले जन्माइएको हो? हारको स्वीकारोक्ति मुस्किल भएर भनौं या कारणलाई आफ्नै जुत्ताले कुल्चिएर गतिलो बहानाको अस्त्र बनाइएको मात्रै पो हो कि? खैर, अन्तिम फैसला गर्ने जिम्मा हजुरकै मथिङ्गललाई।
👨 अच्युत कंडेल 📆 14 April